Video Editor များ
Android Softwares များ
Driver Softwares များ
PC Driver များ
Phone Driver များ
Hard Drive ဆိုင်ရာ
Bagan Kyeboard V.5.9 code ထည့်ပြီးသားပါ..လိုချင်သူများယူနိုင်ပါသည်
19:33 Bagan Kyeboard V.5.9 code ထည့်ပြီးသားပါ..လိုချင်သူများယူနိုင်ပါသည် No comments
ကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ပါ။မန်ဘာဝင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း မိမိ Gmail ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်မန်ဘာဝင်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...................ထင်ရှားအောင်(kyauk phyu thar)
မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင် စုစည်းမှု ( ၁ ) 9/3/2015
19:22 မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင် စုစည်းမှု ( ၁ ) 9/3/2015 No comments
ချမ်း ငြိမ်း added9new photos.
မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင် စုစည်းမှု ( ၂ ) ကို ထက်တင်ပေးသွားပါ့မယ်
အခု ဒီ စုစည်းမှု မှာတော့ မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်းဇာတ်ကားပေါင်း
(၂၀၀) နှင့် ကမ္ဘာကျော် The Lord of the Rings ( ၃ ) ကား ၊
The Hobbit ( ၃ ) ကားနှင့်တကွ
Harry Potter ဇာတ်လမ်းတွဲ ( ၈ ) ကား..
Buddha (လောကကိုအလင်းဆောင်သူ)ကို မြန်မာစာတန်းထိုး
အစအဆုံး ( ၅၄ ) ပိုင်းနှင့်
( ထောင်ဖောက်ကားအဖြစ်လူသိများလှ တဲ့ )
Prison Break Season အစအဆုံး မြန်မာစာတန်းထိုး ( ၈၂ ) ပိုင်းအပါအ၀င်
သရဲဖမ်းညီအကို ဇာတ်ကားအဖြစ် လူသိများလှ တဲ့
Supernatural ဇာတ်လမ်းတွဲကို season (1) ကနေ လက်ရှိပြီးသွားတဲ့ season (9)
အထိ အပိုင်း ( ၂၀၁)ပိုင်း ကို စုစည်းပေးထားပါတယ်..
ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေကို A to Z အစဉ်အတိုင်း စုစည်းပေးထားပါတယ်..
ဒါပေမယ့် The Avengers (2012) ဆိုရင် ကျနော် A အဖြစ်ယူထားသလို
The Hobbit ဆိုရင်လည်း Hobbit အဖြစ် အလွယ်သိတဲ့သူများတာမို့
H အဖြစ်နဲ့ ယူထားပါတယ်..
အဆင်မပြေတဲ့ ဇာတ်ကားရှိရင် နံပါတ် မှတ်ပြီး comments မှာ ပြောပေးခဲ့ပါ..
လွတ်လပ်စွာ ကူးယူမျှဝေ နိုင်ပါသည်....
မှတ်ချက်။ ( က ) ( ခ ) ( ဂ ) ( ဃ ) အဖြစ်
အသစ် ဖြည့်စွက် ထားပါတယ်..။
(က) Buddha (လောကကိုအလင်းဆောင်သူ) မြန်မာစာတန်းထိုး
အစအဆုံး ၅၄ ပိုင်းရှိပါတယ်...
၅၄ ပိုင်းလုံးကို pCloud ကနေ တင်ပေးထားပါတယ်..
အောက်က လင့်ကမှာ တစုတစည်းတည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်
( ခ ) ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးတွေအဖြစ်
ကျော်ကြားလှတဲ့ The Lord of the Rings ၃ ကားကို
မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ အောက်က လင့်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်..
( ဂ ) မြန်မာစာတန်းထိုး အန္ဒိယရုပ်ရှင် ၂၃ ကားကို
အောက်က လင့်ကနေ ကြည့်နိုင်ပါတယ်..။
( ဃ ) မြန်မာစာတန်းထိုး Animation ရုပ်ရှင် ၂၆ ကား ကို
( ၂၀၀၁ ) ကနေ ( ၂၀၁၁ ) အထိ ( ၈ ) ကားထွက်ခဲ့တဲ့
ကမ္ဘာကျော် Harry Potter ဇာတ်လမ်းတွဲပါ..
( ၈ ) ကားလုံး မြန်မာစာတန်းထိုးပါ..
( 1 ) Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) မြန်မာစာတန်းထိုး
(2) Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) မြန်မာစာတန်းထိုး
(3) Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) မြန်မာစာတန်းထိုး
(4) Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) မြန်မာစာတန်းထိုး
(5) Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
(6) Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
(7) Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
( 8 ) Harry Potter and the Deathly Hallows Part2(2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
အောက်မှာ A to Z အစဉ်အတိုင်း စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်..
( 1 ) 10,000 BC (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Adventure | Drama အမျိုးအစားဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ..
(2)3idiots full movie (မြန်မာစာတန်းထိုး)
ကျနော်ကြည့်ဖူးသမျှ အန္ဒိယ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကားပါ..
အန္ဒိယ လူအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပညာရေးစနစ်ကို သာမက
မေးခွန်းထုတ် သရော်ထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ
ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်..
(3) 12 YearsaSlave (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
တောင်းဆိုထားကြတဲ့ Biography | Drama | History
အမျိုးအစားဇာတ်ကားလေးပါ.. IMDb မှာ Ratings: 8.2/10
ရတဲ့အထိ အောင်မြင်တဲ့ကားလေးမို့ မကြည့်ရသေးတဲ့
သူငယ်ချင်းတွေ ကြည့် ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ..
(4) 300 Rise Of An Empire (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
(5) 47-Ronin ( 2013 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
ကျနော်တင်ပေးဖူးသမျှ movie တွေ ထဲမှာ
လူကြည့် အများဆုံးလို့ ဆိုရအောင် အများနှစ်သက်ခဲ့ကြတဲ့ ကားလေးပါ.
(6) 407 Dark Flight 3D (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားကတော့ Horror အမျိုးအစား ထိုင်းသရဲကားပါ..
(7) 999-9999 ( မြန်မာစာတန်းထိုး)
မြန်မာပြည်မှာတောင် copy ကားထွက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလေးလို့ ဆိုပါတယ်
( 8 ) A Single Shot (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Crime | Drama | Thriller အမျိုးအစားဇာတ်ကားပါ..
(9) The Avengers (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Super Hero တွေ စုစည်းထားတဲ့ Action | Adventure | Sci-Fi
( 10 ) Avatar (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
ကျနော်အနှစ်သက်ဆုံးလို့ ယူဆရမယ့် ဇာတ်ကားပါ..
( 11 ) Aashiqui2(2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ IMDb မှာ Your rating: 7.1
အထိရထားတဲ့ Drama | Music | Musical အမျိုးအစား အိန္ဒိယဇာတ်ကားလေးပါ..
( 12 ) After Earth (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
ပြီးခဲ့နှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ Action | Adventure | Sci-Fi ဇာတ်ကားပါ..
တော်တော်များများသိပြီး ဖြစ်ကြမှာမို့ အညွန်းမရေးပေးတော့ပါဘူး..
ကြိုက်သူ မကြိုက်သူတွေ ကြားကဝေဖန်သံတွေ ညံခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပါ။
( 13 ) The Amazing Spider-Man2( မြန်မာစာတန်းထိုး )
( 14 ) Arthur Christmas (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
Animation | Comedy | Drama အမျိုးအစားဇာတ်ကားလေးပါ..
( 15 ) Apocalypto (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီကားကတော့ လူအများပြောနေကြတဲ့ ရေထဲမှာကလေးမွေးတဲ့
( 16 ) A Lonely Place to Die (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Adventure | Crime အမျိုးအစားဇာတ်ကားဟောင်းလေးပါ.
( 17 ) Breaking the Girls (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Crime | Thriller အမျိုးအစားအမျိုးသမီး ဇာတ်လမ်းလေးပါ.
( 18 ) Broken City (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီကားကတော့ Crime | Drama | Thriller အမျိုးအစားဇတ်ကားလေးပါ..
မင်းသား Russell Crowe နဲ့ ထရယ်စမာကားထဲကလူကြိုက်များတဲ့
မင်းသား Mark Wahlberg တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်..
( 19 ) Bullett Raja (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Crime | Drama အမျိုးအစား အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးပါ.
( 20 ) Barfi! (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Adventure | Comedy | Drama အမျိုးအစား အန္ဒိယ ဇာတ်ကားလေးပါ..
( 21 ) Battleship (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဂြိုလ်သားတွေနဲ့ လူသားတွေ တိုက်ခိုက်တဲ့
Action | Adventure အမျိုးအစား ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပါ.
( 22 ) Blood of Redemption (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
ရုရှားအားနိုး အဖြစ် ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ ခေါ်ကြတဲ့
Dolph Lundgren ရဲ့ Action | Crime | Drama အမျိုးအစားဇာတ်ကားပါ..
( 23 ) Big Mommas: Like Father, Like Son (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Comedy | Crime အမျိုးအစားဇာတ်ကားပါ..
( 24 ) Bbuddah Hoga Terra Baap (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
မင်းသားကြီး Amitabh Bachchan ရဲ့ Action | Crime | Drama အမျိုးအစား ဇာတ်ကားဟောင်းလေးပါ.. Action | Crime | Drama ဇာတ်ကားဖြစ်တာမို့
( 25 ) Closed Circuit (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားကတော့ Crime | Drama | Mystery
အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သိပ်စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ..
အဲဒီနောက် ထောက်လှန်းရေးရဲ့ လက်တံရှည်ရှည်
အဲဒီနောက် တရားခံအဖြစ်ပုံဖေါ်မှုနဲ့ London ရဲ့
အကောင်းဆုံးရှေ့နေအဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသား Eric Bana နဲ့
မင်းသမီး Rebecca Hall တို့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ..
( 26 ) Captain America: The Winter Soldier (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကား ကို မိတ်ဆက်ပေးစရာ မလိုဘူးထင်ပါတယ်..
( 27 ) Captain America: The First Avenger (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီနှစ်ထဲမှာ ထွက်တဲ့ The winter soldier ကိုလည်းပြန်တင်ပေးထားပါတယ်..
( 28 ) Chinese Zodiac (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Jackie Chan (ဂျက်ကီချမ်း) ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး ၊ ကိုယ်တိုင်ရိုက် ၊
Chinese Zodiac (2012) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
( 29 ) Carrie (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Drama | Horror ဆိုပေမယ့် Drama
ပိုဆန်တဲ့ကားလေးမို့ ကြည့်လို့ ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ..
( 30 ) Chennai Express (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
နာမည်ကျော် အိန္ဒိယ ရုပ်ရှင်မင်းသား Shah Rukh Khan ရဲ့
Action | Comedy | Romance အမျိုးအစား ဇာတ်ကားပါ.
( 31 ) Croods (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Animation | Adventure | Comedy အမျိုးအစားပါ..တောင်းဆိုထားတဲ့ သူလည်းတော်တော်များပါတယ်..ဇာတ်လမ်းကတော့ .........
ကမ္ဘာဦးခေတ်က မိသားစုလေးအကြောင်းကို ရိုက်ပြထားတဲ့
တီထွင်စဉ်းစားတတ်သော ကောင်လေးနှင့် ဆုံစည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ထူးခြားဆန်းပြားလှသော အပြင်လောကထဲ လျောက်သွားရင်း သာယာလှပသော...
( 32 ) Cyborg Girl (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
IMDb မှာ Ratings : 7.1 အထိရရှိခဲ့တဲ့
Action | Comedy | Romance အမျိုးအစား ဂျပန်ကားလေးပါ..
လူသားကောင်လေး နှင့် သူ့ချစ်သူ စက်ရုပ်မလေးတို့ရဲ့
ရင်ထဲ လှုပ်လှုပ်ခက်ခက် ခံစားရမယ့် ဇတ်ကားကောင်းလေးပါ..
( 33 ) California Scheming (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
( 34 ) Commando (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action အမျိုးအစား အိန္ဒိယ ဇာတ်ကားလေးပါ..
မကောင်းဘူးထင်လို့ မတင်ပဲ နေခဲ့တာ..
တော်တော်လေးကောင်းတယ် တင်ပေးပါလားဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.
( 35 ) Commitment (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Drama အမျိုးအစား ကိုရီးယားဇာတ်ကားလေးပါ..
( 36 ) Chariot ( 2013 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီကားကတော့ Drama | Thriller အမျိုးအစားဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်..
( 37 ) Dracula Untold (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
( 38 ) Doomsday (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Horror | Sci-Fi အမျိုးအစားဇာတ်ကားလေးပါ..
တော်တော်လေးကောင်းဆို ခဏဆိုပြီး ဖွင့်ကြည့်မိတာ
( 39 ) Divergent (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
ကျန်ခဲ့တဲ့ မြို့တစ်မြို့ကို အခြေခံပြီးရိုက်ထားပါတယ်။
( 40 ) Dark.Touch (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Adventure | Horror သရဲကားအမျုိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်
( 41 ) Despicable Me 2(2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ The best animated film Oscar awards
( 42 ) Date and Switch (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
တခါတလေ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ခံစားကြည့်ရတာပေါ့..
ဟာသ ဆိုပေမယ့် ကျနော်တို့ ဆီကလို ငပေါကားမျိုးမဟုတ်သလို
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆိုပေသိ ပေါ့ပျက်ပျက် ခံစားရမှာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး..
မကြည့်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကြည့် ကြည့်ပါ..
( 43 ) Dhoom-3 ( မြန်မာစာတန်းထိုး)
မြန်မာတွေကြားမှာတော့ သူခိုးဇာတ်ကားအဖြစ် နာမည်ကြီးတဲ့
ဒီကားမှာ အက တွေ ပိုမိုမြိုင်ဆိုင်လာသလို အရင် ၁ နဲ့ ၂ မှာ နဲ့ မတူတဲ့
ပုံစံနဲ့ မို့ တမျိုကြည့်ကောင်းပြန်ပါတယ်..
မင်းသားကတော့3Idiots (2009) အပါအ၀င်
အခုတလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ PK (2014) ဇာတ်ကားတွေရဲ့
မင်းသားဖြစ်တဲ့Aamir Khan ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ..
( 44 ) Death Race2(2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
Jason Statham ရဲ့ Death Race ကိုမနေ့ကတင်ပေးခဲ့ပါတယ်..
နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် Death Race2ဆိုပြီး Luke Goss နဲ့ ဆက်ရိုက်ထားတာပါ..ကောင်းမကောင်းကတော့ Death Race3ဆိုပြီး ဆက်ထွက်ခဲ့တာကို
ကြည့်တာနဲ့ သိပါတယ်.. Death Race3ကိုလည်း ဆက်တင်ပေးပါ့မယ်..
( 45 ) Death Race3(2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Sci-Fi | Thriller အမျိုးအစား ထောင်သားတွေရဲ့
သေမင်းကားပြိုင်ပွဲပါ.. ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ လှည့်ကွက်လေးနဲ့
( 46 ) Dawn of the Planet of the Apes (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
( 47 ) Eagle Eye (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Mystery | Thriller အမျိုးအစား ဇာတ်ကားဟောင်းလေးပါ
( 48 ) Edge of Tomorrow (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
၂၀၁၄ ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားတွေပြပါဆိုရင်
ဒီဇာတ်ကားကို ချန်ထားလို့ မရပါဘူး..
ဒီတော့ ဇာတ်ကားကောင်းတကား ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားပေါ့..
LIVE DIE REPEAT....ဆိုတော့...
( 49 ) Epic (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Animation ချစ်သူတွေအတွက် Animation | Adventure | Family
အမျိုးအစား Epic (2013) ကို မြန်မာစာတန်းထိုး နဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ကျနော်ကတော့ အားလပ်ရက်တွေမှာ ဒီလိုဇာတ်ကားလေးတွေ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်တတ်အောင် စောင့်ရှောက်တန်ဖိုးထားတတ်အောင်
ပြီးတော့ ကျနော်တို့ နေ့စဉ်ထိတွေ့နေတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာ
ကျနော်တို့လို သက်ရှိတွေ ရှိနေတာတွေ..
သက်ဝင်နေလှုပ်ရှားနေတာတွေကို ဖော်ကြူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ..
( 50 ) frozen full movie 2013 (မြန်မာစာတန်းထိုး)
ဒီဇာတ်ကားကတော့ The best animated film Oscar awards.
ရရှိခဲ့ တဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်သလို
ကျနော်အကြိုက်ဆုံး Animation ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်.
( 51 ) Fury (2014)မြန်မာစာတန်းထိုး
Brad Pitt ရဲ့ လူပြောအတော်များနေတဲ့
Action | Drama | Warအမျိုးအစား ဇာတ်ကားသစ်ပါ..
IMDb မှာ Ratings: 7.8/10 အထိရထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ..
ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက စစ်မြေပြင်
ကိုရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ တင်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။
( 52 ) Fast & Furious6(2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson တို့ရဲ့ ဇာတ်ကားပါ..
( 53 ) Final Destination5(မြန်မာစာတန်းထိုး)
ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ အသည်းငယ်တဲ့သူတွေ မကြည့်ပါနဲ့လို့ပဲ..
ကြိုတင် အသိပေးပါရစေ.. သေမင်းနဲ့ ဆက်နွယ်သူ တစုနှင့်
သေခြင်းတရားတွေကို.. သဲထိတ်ရင်လှိုက် ခံစားရမဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ
( 54 ) Ghost ( 1990 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီ Ghost ကတော့ တချိန်က ကမ္ဘာကျော်တဲ့ ဝိညာဉ်ချစ်သူကားလေးဖြစ်ပါတယ်
( 55 ) Guardians of the Galaxy (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီGuardians of the Galaxy ဇာတ်ကားက ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ
အသစ် ပြန်ရေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့အဖွဲ့မှာ Peter Quill / Star-Lord, Rocket Raccoon, Quasar, Adam Warlock, Gamora, Drax the Destroyer, နဲ့ Groot တို့အဓိကပါဝင်ပါတယ်။
Marvel Universe တစ်ခုတည်းမှာဖြစ်တာကြောင့် Avengers: The Earth Mightiest Heros နဲ့ Ultimate Spider-man ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွဲမှာ
Cameo ပါဝင်ဖူးတာကလွဲရင် ဒါက ပထမဆုံးအကြိမ်
( 56 ) Gravity (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
( 57 ) G.I. Joe: Retaliation (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
အဟောင်းဆိုပေမဲ့ FB မှာတောင်းဆိုတာများလို့
( 58 ) Hours ( 2013 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီကားကတော့ အများသိကြတဲ့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့
မင်းသားချော Paul Walker ရဲ့
Drama | Thriller အမျိုးအစားဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်
( 58 ) The Hunger Games: Catching Fire (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Jennifer Lawrence ရဲ့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားလေးပါ
( 60 ) Hachiko A Dog's Story (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
သနားစရာ ခွေးလိမ္မာလေးရဲ့ သခင်ပေါ်သစ္စာစောင့်သိမှုကို
ပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ပြထားတဲ့ ကောင်းကားလေး တစ်ကားပါ
( 61 ) Hercules (2014)မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Adventure အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး
admin K.M.A ကမြန်မာဘာသာပြန်ပေးလို့
1080p bluray quality နဲ့ မြန်မာစာတန်းတွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
Action | Adventure အမျိုးအစားဖြစ်သလို ဒီနှစ်ထဲ ထွက်တဲ့
Hercules ကား ၃ ကားထဲမှာ လူကြိုက်အများဆုံး ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်..
( 62 ) The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
ရုပ်သံအကြည် စာတန်းထိုးအမှန်နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ဒီကားက တော့ Hobbit ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ နောက်ဆုံးပိတ် ဖြစ်ပြီး၊
Middle Earth ဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက်
နောက်ဆုံးပိတ် နုတ်ဆက်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
( 63 ) The Hobbit The Desolation of Smaug (2013) မြန်စာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ မိတ်ဆက်ပေးစရာ မလိုဘူးထင်ပါတယ်..
( 64 ) The Hobbit ; An Unexpected Journey (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီကားကတော့ Hobbit ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းပါ
ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ပထမဆုံးမိတ်ဆက်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
အပိုင်း( ၁ )( ၂ )( ၃ ) အစုံ ကြည့်နိုင်အောင် တင်ပေးထားပါတယ်..
( 65 ) How to Train Your Dragon2(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Animation | Action | Adventure အမျိုးအစားပါ..
( 66 ) I.Frankenstein.2014 (မြန်မာစာတန်းထိုး)
ကြည့်လို့ ဒေါင်းလို့ အဆင်မပြေတဲ့ သူတွေအတွက်
ဒီဇာတ်ကားတော့ ဒီနှစ်အစောပိုင်းထွက်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ
( 67 ) In Fear (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Horror | Mystery | Thriller အမျိုးအစားပါ..
သဲထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်လမ်းတွေ နှစ်သက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ
လက်မလွတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တကားပါ
( 68 ) Issaq (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action, Drama အမျိုးအစားဇာတ်ကားပါ..
( 68 ) John Wick (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
2014 ရဲ့ အကောင်းဆုံး Action ဇာတ်ကားလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ John Wick (2014) မကြည့်ရသေးရင် ကြည့် ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ..
( 70 ) Just LikeaWoman (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
မင်းသမီး Sienna Miller နဲ့ Iran မင်းသမီးချောလေး Golshifteh Farahani တို့
ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထား Drama ဇာတ်ကားလေးပါ..
ဟာသနှောထားတဲ့ ဇာတ်မြုးလေးဖြစ်သလို ဆွဲဆောင်မှုရှိလှတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ..
( 71 ) Journey to the West (2013)မြန်မာစာတန်းထိုး
ဟာသ လေးပါးပါးခပ်ထားတဲ့ ဟင်းကောင်းတခွက်လို့ ရသစုံတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ..
( 72 ) 22 Jump Street (2014)မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Comedy | Crime အမျိုးအစားဇာတ်ကားလေးပါ..
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသ Action နှစ်သက်သူတွေ
( 73 ) 21 Jump Street (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Comedy | Crime အမျိုးအစား ဇာတ်ကားလေးပါ..
22 Jump Street ( 2014 )ကိုလဲတင်ပေးထားဖူးပါတယ်..
ကမ္ဘာကျော်ဟာသ ကားတွေမို့ ကြည့်ဖြစ်အောင်သာကြည့်ပါ..
( 74 ) John Carter (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Adventure | Fantasy အမျုိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်
အရင်ကလဲတင်ပေးဖူးပါတယ် တောင်းဆိုထားလို့ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် မရိုးနိုင်အောင်ကောင်းလွန်းလို့
( 75 ) Jolly LLB (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Comedy | Drama အမျိုးအစား အိန္ဒိယဇာတ်ကားလေးပါ..
ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေ လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ...
( 76 ) Kung Fu Jungle (2014)မြန်မာစာတန်းထိုး
Donnie Yen ရဲ့ ဇာတ်ကားသစ်လေးပါ..
Action | Thriller အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး
IMDb မှာ Rating:7.1/10 အထိရထားပါတယ်..
ကျနော့်သူငယ်ချင်း ဆူးခင်းလမ်းသုတရသ က မြန်မာဘာသာပြန်ပေးထားတာပါ..
Hahou Mo အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Donnie Yen ဟာ
သိုင်းပြိုင်ရင်းကနေ လူသတ်မိပြီး ကိုယ်တိုင်အဖမ်းခံထောင်ကျသွားပါတယ်။
သူထောင်ကျပြီး ၃ နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာ
လူသတ်မှုတခုကို သတင်းတခုမှာ တွေ့ရာကနေ..
ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ Luk Yuen-Sum အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့
မင်းသမီး Charlie Yeung ကိုဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်..။
အဆင်မပြေတဲ့ အတွက်ထောင်ထဲမှာတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ပြီး ကြိုးစားမှ
ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ Luk Yuen-Sum နဲ့ တွေ့ရပါတယ်..
အဲဒီမှာ လူသတ်သမားကို သူဖော်ထုတ်နိုင်ကြောင်းနဲ့
အဲဒီအတွက် သူ့ကို လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်..။
လူ ၇ ယောက်ရဲ့ နာမည်တွေ ရွတ်ပြပြီး..
အဲဒီလူတွေ အသတ်ခံရလိမ့်မယ်လို့ သူပြောခဲ့ပါတယ်...။
ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ Luk Yuen-Sum က လက်ခံခဲ့ပါဘူး..။
မကြာခင်မှာပဲ သူပြောတဲ့ လူ ၇ ယောက်ထဲက တယောက်အသတ်ခံရပြန်ပါတယ်..။
( 77 ) Krrish3(2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
နာမည်ကျော် အန္ဒိယ ဇာတ်ကားပါ.
( 78 ) Like Stars on Earth (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ကမ္ဘာကျော်အိန္ဒိယရုပ်ရှင် တွေထဲက ထိပ်ဆုံးနားမှာ ရှိနေတဲ့ Drama | Family အမျိုးအစား ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး ဒီဇာတ်ကားကို ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့3Idiots (2009) အပါအ၀င် အခုတလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ PK (2014) ဇာတ်ကားတွေရဲ့ မင်းသားဖြစ်တဲ့Aamir Khan ကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာ လုပ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ..
( 79 ) Lucy (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီ Lucy ဇာတ်ကားကတော့ ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်
( 80 ) Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားကတော့ IPMan ဇာတ်ကားတွေနဲ့
ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့Donnie Yen ရဲ့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားပါ..
ကျနော်ကိုယ်တိုင် ကြိုက်လွန်းလို့ မြန်မာဘာသာပြန်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
( 81 ) Life of Pi ( 2012 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
Life of Pi ရုပ်ရှင်ကို မကြာသေးခင်ကပဲ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့အတူ
ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်လည်း စာရေးဆရာ Yann Martel ရဲ့ Life of Pi ၀တ္ထုကို ဖတ်ပြီးကာစ။ ဒီစာအုပ်ဟာ ခိုင်မြဲတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေနဲ့
လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ အန္တရာယ်တွေကြားက အသက်ဆက်
လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ အံ့သြဖွယ် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။
စာပေဆိုင်ရာ ဆုတွေ ရရှိခဲ့တဲ့အပြင် ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့လည်း
အော်စကာဆု ရခဲ့ပါတယ်။ Life of Pi ဟာ လက်ရာမြောက်တဲ့
ဖန်တီးချက်တွေနဲ့ သင့်ရဲ့ အာရုံကို ထူးထူးခြားခြား ဖမ်းစားနိုင်တဲ့အပြင်
ဒီဇာတ်ကားမှာ ဘ၀အတွက် အရေးကြီးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
( 82 ) Lone Survivor (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Biography | Drama အမျိုးအစား ဇာတ်ကားလေးပါ..
( 83 ) Left Behind (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
မင်းသားကြီး Nicolas Cage ရဲ့ 10 လ ပိုင်းမှာ ရုံတင်ခဲ့တဲ့
Action | Sci-Fi | Thriller အမျိုးအစား ဇာတ်ကားပါ..
( 84 ) Lovelace ( 2013 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားကတော့ အမေရိကန် စာရေးဆရာမ Linda Boreman ရဲ့
အတ္ထုပတ္တိ ကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့
ပညာပေး ဇာတ်ကားလို့ ဆိုရမယ့် ဇာတ်လမ်းပါ..
( 85 ) Life ofaKing (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action ၊ Drama နှစ်သက်သူတွေအတွက်2013 ရဲ့
အကောင်းဆုံး Drama ဇာတ်ကားဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး...
( 86 ) Lan Kwai Fong3( 2014 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
18+ လို့ ပြောရမယ့် Comedy | Drama | Romance အမျိုးအစား
တရုတ်( ဟောင်ကောင်) ဇာတ်ကားလေးပါ..
( 87 ) Lan Kwai Fong2( 2012 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
( 88 ) Lan Kwai Fong ( 2011 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
( 89 ) MAMA (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
MAMA ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
( 90 ) Mr. & Mrs. Smith (2005) မြန်မာစာတန်းထိုး
Brad Pitt နဲ့ Angelina Jolie တို့ရဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်ကားပါ..
( 91 ) Maleficent (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Angelina Jolie ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေလက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားပါ..
( 92 ) My Girlfriend Is an Agent (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Comedy | Romance အမျိုးအစား ကိုရီးယား ဇာတ်ကားလေးပါ..
( 93 ) The Matrix Revolutions (2003) မြန်မာစာတန်းထိုး
Matrix သုံးကားထဲက နောက်ဆုံးကားပါ..
( 94 ) The Matrix Reloaded (2003) မြန်မာစာတန်းထိုး
Matrix သုံးကားထဲက ဒုတိယမြောက်ကားပါ..
( 95 ) The Matrix (1999) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Sci-Fi အမျိုးအစားဇတ်ကားလေးပါ..
IMDb မှာ Ratings: 8.7 အထိအောင်မြင်ခဲ့ပြီး
The Matrix Revolutions နဲ့ The Matrix Reloaded ဆိုပြီး
၂ ကား ဆက်ထွက်ထားတာကိုလည်း မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့တင်ပေးထားပါတယ်...
( 96 ) Mandela: Long Walk to Freedom (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့..ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးမီးရှုတန်ဆောင်
တောင်အာဖရိကခေါင်းဆောင် ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင်
Nelson Mandela ( ၁၉၁၈ - ၂၀၁၃ ) ရဲ့
သူ့ဘ၀ နဲ့ သူရဲ့ တော်လှန်ရေးအတွင်းက တစိတ်တဒေသ ကို..
ရိုက်ကူးထားတဲ့ Biography | Drama | History အမျိုးအစား ဇာတ်ကားပါ..
( 97 ) Non-Stop (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
မင်းသားကြီး Liam Neeson ရဲ့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပါ..
ဇာတ်လမ်းကတော့.. Bill Marks အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့
Liam Neeson ဟာ လေယာဉ်ပေါ်မှာသေနတ်ကိုင်ခွင့်ရတဲ့
ခရီးစဉ်တခုမှာ သူမသိတဲ့ လူတယောက်က ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုပေးပြီး
ဒေါ်လာသန်း ၁၅၀ တောင်းကာ သူတောင်းတဲ့အတိုင်းမပေးရင်
မိနစ်နှစ်ဆယ် တိုင်း လူတစ်ယောက် သတ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်လာပါတယ်...
( 98 ) Now You See Me (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
၀၁၃ ရဲ့ People's Choice Award for Favorite ရခဲ့တဲ့
မျက်လှည့်ဆရာ(၄)ယောက် နှင့် ဘဏ်ဖောက်ထွင်းမှု ၊
လက်စားချေမှု နှင့် FBI ကိုလှည့်စားထားသော
ရင်လှိုက်ရှုမော ခံစားရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ..
( 99 ) Ninja Apocalypse (2014)မြန်မာစာတန်းထိုး
( 100 )Nurse 3D (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Horror | Thriller အမျိုးအစား အမျိုးသမီးစိတ္တဇ လူသတ်ကားပါ..
မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင် စုစည်းမှု ( ၂ ) ကိုဆက်တင်ပေးသွားပါ့မယ်..
ထင်ရှားအောင်(kyauk phyu thar)မှကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ........သူငယ်ချင်းများအဆင်ပြေကြပါစေ။
ဘာသာပြန် စာအုပ် (၄၅)free download
(၁)သူသေကိုယ်သေ (မြန်မာပြန်)(တက္ကသိုလ်နေ၀င်း) http://www.mediafire.com/?eehk5bux345f68v (၂)အင်ဖာတိုက်ပွဲ (တက္ကသိုလ် နန္ဒမိတ်) http://www.m...
Remi Note များနဲ့ Myanmar Font & Keyboard
Remi Note များနဲ့ Myanmar Font & Keyboard Remi Note များကို အလွယ်တကူ Root လုပ်နည်းနဲ့ မြန်မာဖောင့်ကီးဘုတ်တို့ကို ထည့်နည်းကို ကျေ...
♥ ♥ Huawei - China - Clone တွေကို Recovery Mode ဝင်နည်း နှင့် Pattern Lock - အခြား အသုံး ဝင် Tools များအကြောင်း ♥ ♥
အကြောင်း အမျိူးမျိူးကြောင့်... Firmwre ပြန်တင်ရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ...Pattern Lock ကြတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်... မဖြစ်မနေ .. ( Recovery Mode ) ...
ကာမသိဒ္ဓိကျမ်း - ပီမိုးနင်း
linkသေသွားလိုပြန်လှန်တင်ပေးပါလိုတောင်းဆိုထားတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်ဦးအာကာတင်ပေးလိုက်ပါတယ် စာအုပ် - ကာမသိဒ္ဓိကျမ်း ရေးသာ...
ချမ်း ငြိမ်း added9new photos . မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင် စုစည်းမှု ( ၁ ) 9/3/2015 အကြိုက်သာ ရှယ်ထားပေတော့... ညတုန...
ဒီနေ့ တော့ဦးအာကာကိုမေးထားတဲ့ ညီငယ်လေးအတွက်ရယ် မသိသေးသူများအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် C8816Dကို အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ rootလုပ်နည်းလေးတင်ပြေ...
Google app မပါဝင်သော ဖုန်းများအတွက် Gapp installer Version အစုံ
Gmail,Gtalk,Play Store,မပါတဲ့,Android ဖုန်းတွေအတွက်၊Google Service များဖြစ်တဲ့၊Gma il,Gtalk,နှင့်P laye Store အစရှိတဲ့Application တွေကိုထ...
အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့အင်တာနက် free သုံးနည်းလာပါပြီးခင်ဗျာ တစ်ကယ်သုံးလို့ရပါတယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ ဖုန်းမှာပိုက်ပိုက်မဖြည့် ထားဖို့ပါပဲ ...